विचार गर्नुहोस् ! बिहान ढिलासम्म सुत्नेहरुलाई लाग्छ यस्ता भयानक रोग | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य विचार गर्नुहोस् ! बिहान ढिलासम्म सुत्नेहरुलाई लाग्छ यस्ता भयानक रोग
१९ मंसिर २०७४, मंगलवार १४:३१
सुतिराख्न कसलाई मन पर्दैन र ? सुत्दा दिमाग तिखो हुन्छ भने शरिरमा दिनभरी काम गर्नका लागि ऊर्जावान् राख्छ ।यतिमात्र होइन, पर्याप्त निन्द्राले मोटोपना, मधुमेह, हृदय रोग र समयपूर्व मृत्युको सम्भावना निकै कम हुन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ कि कम सुत्दा शरिर र दिमागमा नकारात्मक असर पर्ने गर्दछ तर धेरै सुत्दा शरिरमा पुग्ने नकारात्मक असरबारे जानकार हुनुहुन्छ तपाईं ?
Previous articleखम्बीर गर्बुजाले भने,‘ निर्वाचन मेरो प्रस्थान विन्दु हो’ (प्रेस विज्ञप्ती)
Next articleकानले दिन्छ यी रोगहरुबारे पूर्व संकेत